Madaxweynaha Puntland oo Ka Hadley Xaflad Lagu Xusaayey Maalintii La Doortey(Dhegayso) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Puntland oo Ka Hadley Xaflad Lagu Xusaayey Maalintii La Doortey(Dhegayso)
Madaxweynaha Puntland oo Ka Hadley Xaflad Lagu Xusaayey Maalintii La Doortey(Dhegayso)
January 9, 2010 - By: Hanad Askar
Waxaa habeenimadii xalay (08.01.2010) lagu qabtey madaxtooyada caasimadda Puntland ee Garoowe, xaflad si weyn loo soo agaasimey taas oo lagu xusaayo sanadguuradii kowaad ee doorashadii Madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Faroole iyo Cabdisamad Cali Shire.
Xafladda ayaa waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf badan oo ka tirsan qaybaha bulshada sida, Xildhibaano, Wasiiro, Isimada, Culimada, Ganacsatada, Haweenka iyo sqaybo kale oo badan.
Xafladda ayaa waxaa lagu soo bandhigey waxyaabihii u qabsoomey dawladda oo muuqaal ah iyo waxyaabihii ka dhacay Puntland.
Garaad Abshir Saalax ayaa ka hadley bilowgii xafladda waxa uu ka sheekeeyay ka qaybgalkii shirkii SSC ee Kenya, Garaadka ayaa tibaaxay in shirkaas si qaldan loo fasirey loona sheegay Dawladda Puntland in Puntland lagu duminaayo, taasna waa mid aan jirin ayuu yiri Garaadku.
Garaad Abshir ayaa sheegay in dhismihii Puntland Gobolada Sool ay kow ka ahaayeen, suurta galna maaha Puntlantii ay dhiseen in ay dumiyaan. Garaad Abshir ayaa sheegay midda ay ka doonayaan madaxweynaha Puntland in ay tahay gobolada aan ka nimi ayuu yiri waxaa qabsadey maamul la yiraahdo Somaliland, hadde yey tahay in ay soo ceshaan anagu ilaa Puntland ayaan ka tirsanahay ma beel baa mise maamulka aan ka tirsanahay ayaa looga fadhiyaa in ay hogaamiyaan xoreynta dhulkaas.
Garaad Abshir ayaa kula kaftamay Madaxweynaha Puntland Â haddii uu soo cesho Sool in uu madaxweyne ka noqonaayo inta Puntland jirto, taas oo uu uga danlahaa in marlabaadna lagu dooranaayo.
Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa kamid ahaa isimadii ka hadley, Islaanka ayaa ugu baaqey xukuumadda waxqabad dhab ah oo la taaban karo, waxaan idiin dooranay waa wax qabad, ee dawladdu haka soo baxdo wixii loo doortey, Â ayuu yiri Islaanku. Islaanka ayaa hadalo badan oo dardaaran ah u jeediyey dawladda, waxaana uu markii danbe dardaaran u jeediyey shacabka Puntland oo uu ugu baaqeyn in ay dawladda la shaqeeyaan. Islaanka ayaa kula kaftey xukuumadda in ay sheegaan in ay waxqabteen laakiin aysan muuqan, Islaanka ayaa hadalkiisa ku soo gebagebeeyay bal sanadkaan aragnaye bal kan danbe wixii dawladdu iyo shacabku la yimaado ayaan sugaynaa.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo khudbad kooban jeediyey ayaa ku soo dhaweeyay mikrofoonka Â Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa khudbad dheer ka jeediyey waxaana uu dulmar guud ku sameeyay waxqabadkii mudadda sanadka ahayd ee uu talada hayey madaxweynaha ayaa sheegay in sanad kahor markii uu talada qabanaayey xaalku sida uu ahaa la wada ogaa dibna aanu ugu laabanayn in uu sheego, laakiin wax badan ayaan qabanay ayuu yiri waxaana uu ka hadley:
Dhegayso khudbadda Madaxweynaha Puntland:[powerpress: url=”https://horseedmedia.net/radiohorseed/faroole/Qudbadii Madaxweynaha DPL C-raxmaan Faroole ee Sanadguuradii Xilka uu hayay.mp3″]
Iyo waxyaabo kale oo badan.